५५ अर्बको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदै सकियो तीन अर्ब ! – Halkhabar kura
२६ चैत्र २०७७, बिहीबार १७:११
५५ अर्बको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदै सकियो तीन अर्ब !
तत्कालीन नेकपा सरकारभित्र असन्तुष्टिको झिल्को बाल्न सहयोगी बनेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चर्चा छैन यतिबेला । तर एमसीसीका नाममा राज्यका तर्फबाट खर्च भने भई नै रहेको छ । नेपाल र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट भविष्य नै अनिश्चित भएको यो परियोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ ।
Previous पुलिसले ३ सयपटक उठबस गर्न लगाइएपछि एक व्यक्तिको निधन
Next कोरोनाले पुरुषहरूको अण्डकोष सखाप !